I-Clamshell Telescopic Arm, i-Telescopic Arm, i-Telescopic Excavator Boom - ISICWANGCISO SOKUFAKWA KWAMAHHALA
Ukujikeleza Okujikelezayo Okujikelezayo
IHydraulic Pile Breaker
I-Hydraulic Power Pack
I-Clamshell Telescopic Arm
Insiza yokungenisa phesheya kwezilwandle. Qinisekisa ikhwalithi yomshini kanye nensizakalo enhle ngemuva kokuthengisa. Funda kabanzi
Umkhiqizi wochungechunge oluphelele kakhulu lokumba okuncane okujikelezayo kweChina. Funda kabanzi
Isitifiketi sokuphathwa kohlelo lwe-ISO9001 esidlulile, sathola isitifiketi se-CE. Funda kabanzi
I-TYSIM PILING EQUIPMENT CO., LTD.
I-TYSIM PILING EQUIPMENT CO., LTD ibhizinisi eliholayo elikhethekile ku-R&D kanye nokukhiqizwa kwamagundane amancane nendawo aphakathi nendawo okumba imishini. I-TYSIM iyilungu lekomidi labaphathi le-Association of the National Foundation Industry ngaphakathi kweNhlangano Yezimboni Zomshini Wokwakha Kazwelonke. I-TYSIM, okuyinhlangano kazwelonke yezobuchwepheshe, idlulise isitifiketi sokulawulwa kwekhwalithi ye-ISO9001 kanye nesiFundazwe seJiangSu.
SINGA EMHLABENI WONKE
Ama-rigs we-TYSIM wokumba awulungele kuphela amaphrojekthi ahlukahlukene wokwakha wedolobha nawamadolobha. Zilungele indlela ehamba ngaphansi komhlaba, i-viaduct kanye nokwakhiwa kabusha kwamaphrojekthi wefa lakudala. Ibonisa ukusebenza okuphezulu nokusebenza okuthembekile, uchungechunge lwe-KR lwemigodi emincane yokugaya ithole ukubonwa okuhle kwe-China kanye nakwamanye amazwe.I-TYSIM imikhiqizo ithunyelwe kwamanye amabhlokhi e-Australia, Singapore, Russia, Thailand, Argentina, Vietnam, Indonesia, Philippines, Qatar, Zambia kanye namazwe angaphezu kwama-40. Ngokuhambisana nokuthuthuka kwemboni yezokwakha yaseChina kuya ezingeni eliphakeme elilandelayo, ama-rigs we-TYSIM wokumba uzoba yimishini efanele ingqalasizinda yedolobha nokwakhiwa kabusha.
uphawu01 uphawu02 uphawu03 uphawu04
I-Rotary Drilling Rig KR150C
I-Rotary Drilling Rig KR150A
I-Rotary Drilling Rig KR125M
I-Rotary Drilling Rig KR125A
I-Rotary Drilling Rig KR90A
I-Rotary Drilling Rig KR60A
Ukujikeleza Okuzungezayo Okuyisiyingi KR50
Ukujikeleza Okuzungezayo Okuyisiyingi i-KR40
Amazwe sithumele kuwo
Amazwe Amalungelo obunikazi
IMINININGWANE YOKUFUNDA KOKUGCINWA KWEMITHETHO NAMABHODI
ISIVIVINYO Futhi Isazi
Hambani Isandla Sisondele
Iqembu le-TYSIM lihlanganise iminyaka engaphezu kwe-10 yesipiliyoni se-R&D esiqinile ekujikeni kokujikijela kokushintshana nobuchwepheshe bamuva nemiphumela yocwaningo yamanyuvesi amabili aholayo eChina - IYunivesithi yaseTianjin kanye neTongji University - ukuthuthukisa ubuchwepheshe bayo uqobo bokuphathelene ekwakhiweni kwesakhiwo seCompact; Umdwebo wokuqina; Umklamo wesistimu ye-Hydraulic; kanye nohlelo lokulawula ngogesi. Kubhalise ukwakhiwa kwamalungelo obunikazi angaphezu kuka-40. Imigodi yokumba ngokushintshana ekhiqizwe yiTysim inezinto ezilula ukusebenzisa izici, ukuthembeka okuphezulu kanye nokusebenza kahle okuphezulu. I-Tysim isidlulile isitifiketi sokulawulwa kwekhwalithi ye-ISO9001 kanye nesitifiketi sebhizinisi eliphakeme. Lonke uchungechunge lwemikhiqizo selwedlule isitifiketi se-CE.
Imikhiqizo ifaka i-hydraulic piling rig, i-modular piling rig, i-hydraulic inqwaba breaker, i-mechanics wall diaphragm yokudonsa neminye imikhiqizo ehlobene. Isoftware yomklamo ophambili owenziwe ngokusobala osuselwa emhlabeni wonke kanye nesoftware yokuhlaziywa kwamandla ukumukelwa ukubonisa indawo yokusatshalaliswa kwamandla kwesakhiwo somkhiqizo ngokwenzelwa ngokwengeziwe nokwandisa ukwakheka komkhiqizo. Ngombono omuhle wamazwe omhlaba kanye nonjiniyela abahle kakhulu, i-TYSIM ibamba umqondo we "Focus, Dala, Valave" futhi ugxile ku-R&D yemikhiqizo yokwakha isisekelo yokuphamba. Ngesitayela somsebenzi se- "Gxila kwimininingwane, Hlala uthuthuke" kanye nezinzuzo zobuchwepheshe obuholayo nemakethe, i-TYSIM izozama ukwakha i- "TYSIM" ukuze ibe "uhlobo lokuqala lwasekhaya kanye nomkhiqizo odume kakhulu" wemishini yokufaka amapayili ochwepheshe eminyakeni engu-5, Okwamanje kugqugquzelwa ukwakhiwa kwezisekelo zomphakathi.
Ngama-patents angaphezu kuka-40, uchungechunge lwe-TYSIM KR lwamakhompiyutha amancane athola isitifiketi se-CE, esizolungela amaphrojekthi ahlukahlukene wokwakha womphakathi nawamadolobha. Isebenza ngokusebenza okuphezulu nokusebenza okuthembekile, i-KR uchungechunge lwama-rigs amancane wokuthola izibhedlela bathole idumela le-Well kuwo womabili amakhasimende aseChina nawakwamanye amazwe kumaphrojekthi wokwakha wezitimela zangaphansi, i-viaduct kanye nezakhiwo zokuhlala. Kuthunyelwe e-Australia, eRussia, eThailand, eArgentina, eIndonesia, eMalawi, eVietnam, e-Dominica nakwamanye amazwe, ama-rig we-TYSIM atholakalayo azoba yimishini efanele ukwakhiwa kwengqalasizinda yedolobha.
I-Tysim Piling Equipment Co, Ltd ikhethekile ku-R&D, ekhiqiza nasekuthengiseni imishini yokufaka izingcingo kanye nezingxenye ezisizayo. I-Tysim igxila kwi-R&D nasekwenzeni imishini yezinqwaba, futhi iyona kuphela ibhizinisi e-China enikezelwe ekwakhiweni kwezimbiwa ezincane eziphakathi nendawo zokushayela ubunjiniyela bezombusazwe. Le nkampani ithole amalungelo obunikazi angaphezu kwamashumi amane ngemikhiqizo yemishini yenqwaba. I-TYSIM ineqembu elakhiwa abacwaningi abaphezulu nabachwepheshe embonini, futhi isungule uhlelo lwe-R&D oluphambili emhlabeni jikelele kanye nesiteji sobuchwepheshe. Ngohlelo oluzihola phambili lokuphatha embonini nomqondo "wethembekile", i-TYSIM ilokhu ithuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo futhi yakhe ukuncintisana okuyinhloko. Le nkampani isungule ubudlelwano bokusebenzisana isikhathi eside nezikhungo zokucwaninga zesayensi zamanyuvesi adumile asekhaya afana neTianjin University, enikeza ubuchwepheshe obunamandla futhi obuhlala njalo bokuxhasa ubuchwepheshe beTYSIM.
I-Alliance of Pilling Industry Elites of China (APIE ngamafuphi) yasungulwa eWuxi ngoDisemba 2016. I-APIE yasungulwa ngokuqoqa amabhizinisi aholayo emikhiqizweni yemikhakha yemisebenzi yezinqwaba yemisebenzi ngenxa yokuphendula kukhuthazo nokuphefumulelwa okuvela ku- “Fusion Shared and Unified Ukuthuthuka "kubekwe phambili ngabaholi abanjengoHuang Zhiming noGui Chuanxin njll. We-Branch Association of Pile Works ngaphansi kweChina China. I-APIE yaqalwa ngokuhlanganyela yizinhlangano eziyisithupha zeTysim Pilling Equipment CO., LTD nenye inkampani ehlobene ne-pilning foundation.
THOLA IZINDABA EZINHLE KAKHULU ezivela kithi
I-TYSIM PILING EQUIPMENT CO., LTD. yilona kuphela ibhizinisi likazwelonke eliphakeme lobuchwepheshe leR & D futhi lokwenza imishini emincane yokuphamba naphakathi e-China [..]
I-HuiJing Rd 345, Indawo Yezomnotho YaseHuishan, Idolobha laseWuxi, Isifundazwe saseJiangsu, China